Muuri News Network » WAR DEG DEG AH: Ninkii soo abaabulay Weeraradii Paris oo la dilay + SAWIRRO
WAR DEG DEG AH: Ninkii soo abaabulay Weeraradii Paris oo la dilay + SAWIRRO
Dowlada Faransiiska ayaa shaaca ka qaaday in Ciidamada amaanka ay dileen ninkii lagu eedeenayay in uu soo abaabulay Weeraradii dhawaan ka dhacay Magaalada Paris ee lagu dilay dad kor u dhaafayay 130-qof.
Ciidamada amaanka Faransiiska ayaa ashalay howlgal gaar ah waxa ay ku qaadeen guri ay ku sugnaayeen kooxo hubeesan oo la tuhmayay in ay xariir la lahaayeen Kooxihii dhawaan weerarada kala duwan ka fuliyay magaalada Paris.
Howlgalkii shalay ayaa la xaqiijiyay dadkii lagu dilay in uu kamid ahaa Maskaxdii ka dambeesay Weeraradii Paris ka dhacay ninka lagu Magcaaabo Abdelhamid Abaaoud, Ciidamada ayaana baadi goob xoogan ugu jiray ninkii maalmihii lasoo dhaafay .
Baaritaano ay sameeyeen ayaa lagu ogaaday in Abdelhamid Abaaoud, uu kamid ahaa sadax qof oo shalay lagu dilay howlgal ka dhacay gudaha Paris, waxaana geerida ninkan lagu xaqiijiyay baaritaano dheecaan oo lagu sameeyay.
Abdelhamid Abaaoud oo 27-sano jir ahaa, ayaa heestay dhalashada Dalka Biljimka waxa uuna ninkan oo asal ahaan kasoo jeeda Dalka Maroko uu kusoo bar baaray xaafad ku taalla Magaalada Brussels , waxaana ninkan horey loogu xiray magaaladaasi isaga oo loo heestay fal dambiyeedyo.
Ciidamada Faransiiska ayaa wali baadi goob ugu jira nin kale oo la tuhmayo in uu ka qeyb qaatay weeraradii ka dhacay Magaalada Paris oo isna lagu magacaabo Salah Abdeslam, ninkan ayaana walaalkii waxa uu kamid ahaa ragii weerarka ka fuliyay Magaalada Paris.
Weeraradii dhawaan ka dhacay Magaalada Paris ayaa lagu dilay dad kor u dhaafaya 129-qof oo u badnaa Faransiis, waxaana dadkaasi badankood lagu dilay Weerar lagu qaaday goob Tayaatar ah oo xiligaasi bandhig uu ka socday.